musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Kufamba muUK kwakanyanya kudhura
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Rail Kufamba • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Theme Parks • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
UK Dzimba Yekushanya Yakazvitengesa Pachayo Kunze kweMusika
UK epamba zororo nevekupa pekugara vakawedzera mitengo zvakanyanya mukati me2021 pakati pekuwedzera kwekugara 'kudiwa'.
UK yemumba yekushanya kwemitengo inowedzera yaigona kuona vafambi veBritain vachidirana kune vanoshanda vanobuda muna 2022
Kuwedzera kwemitengo yekushanya mudzimba kunogona kudzora vashanyi veBritish muna 2022.
36% yevagari vekuUK vane 'zvakanyanya' kana 'zvimwe' vane hanya nemamiriro avo emari.
Vazhinji vanopa maholiday ekuUK vanoda kuongororazve zano ravo remitengo izvozvi.
vamwe UK zororo remumba uye vanopa pekugara vakawedzera mitengo zvakanyanya muna2021 pakati pekukwira 'kugara' kuda uye izvi zvinogona kumisa vashanyi veBritish muna 2022.
Kuwedzera kwemitengo yenjodzi inokonzeresa nemukana wakarasika kumakambani mazhinji eUK ekushanya ayo aimbove nemukana wekutanga wekuwedzera kukwikwidzana nevashanyi vekunze vanobuda. Panzvimbo pezvo, mitengo yakawandisa inogona kuvabhadharira kunze kwemusika wezhizha 2022 uye nekupfuura, apo vafambi vekuUK vangangodaro kuenda kunze kwenyika zvakare.
Maererano neQ1 2021 UK ongororo yevatengi, 26% yevakabvunzwa vakatema zvimwe zvigadzirwa kubva mubhajeti yavo nekuda kwedenda. Zvakare, muchidzidzo chimwe chete ichi, makumi matatu neshanu evakabvunzwa vekuUK vakati vaive 'zvakanyanya' kana 'zvimwe' vane hanya nemamiriro avo emari, zvichiratidza indasitiri yekufamba kudiwa kwezvikwikwidza zvemitengo.
Kunyangwe zvave zviri zororo kune iyo UK yekushambadzira indasitiri kuona yekushanya kwemumba kuwedzera muzhizha rino, zvinoodza moyo kuona makambani achitarisa pane pfupi-mibairo pane kutarisa kugadzikana kwenguva refu kweUK yekumba yekushanya indasitiri. Makambani aive nemukana wakakura wekugadzira yakasarudzika yeBritish yezororo ruzivo uye kuwedzera kukosha mukuita. Nehurombo, uyu mukana uri panjodzi yekurasikirwa nevazhinji vanopa pekugara nekuda kwekunyanyisa kushandisa maitiro kune vafambi.
Vazhinji vangangoita vashanyi vekumba vakafananidza mutengo kune zvese-zvinosanganisira European pasuru zororo, izvo zvinowanzo sanganisira nendege, pekugara, kuchinjisa, chikafu, uye zvinwiwa, uye zvakawanikwa kuti mazororo aya anowanzo kuve akadhura kune iwo chaiwo madeti nemazororo epamba. Zvakare, mitemo iri kuitiswa yakajeka, kudzima uye kudzosera marongero akaitwa akanaka, uye vatengi vazhinji vakabaiwa zvakakwana. Nekuda kweizvozvo, hwindo riri kuvhara pamukana wekushanya mudzimba kuti uve nemaonero anogara nekusingaperi, uye vazhinji vanopa zororo vekuUK vanofanirwa kufungisisa zano ravo remitengo izvozvi.
Nezvikamu zveEurope kuvhura vashanyi zvakare, vafambi vari kuenzanisa mitengo kupfuura nakare kose. Pakupedzisira, mabhizinesi ari kuwandisa mari anogona kuzvitengesa kunze kwemusika wekufamba, unozvikuvadza uye usingagone mukufamba kwenguva. Makambani epamba ezororo anofanirwa kunzwisisa mamiriro emakwikwi evashandi vekufambisa vanobuda uye kukwikwidza kunotyisa kwavanogadzira. Jet2holidays neTUI vanotungamira nzira yekupa mapakeji ezororo sezvo vaine masimba akakurisa pamusoro pechavo chavo chekupa, vachipfuudza kuchengetedza kune mufambi muchimiro chemakwikwi mitengo.
Pakufungisisa, vekuEngland vanopa mazororo nzira yehasha yemari iri kudiwa inoita kunge isina ruzivo uye vashoma-vanoona uye vanobuda vashanyi vangangodzosa vatengi vekare nekukurumidza kupfuura zvaitarisirwa semhedzisiro.